Chirimwa Chirimwa - Chii Chaunofanira Kuita Nenzvimbo Yakanyanya Yevhu PH - Potatoes News
PH yevhu inobata zvinhu zvakawanda zvekugadzirwa kwezvirimwa, kunyanya kuwanikwa kwehutano.
Mazhinji eminda yedu mikuru yezvirimwa sevhu risingapindiri pH kubva pa6-7. Ivhu rine pH rakakwira kupfuura 7.5 rinoonekwa sealkaline. Izvi zvinogona kukonzera nyaya nesimbi uye phosphorus kuwanikwa kune zvirimwa nekuda kweiyo yakakwira calcium carbonate muvhu. Kuongorora kwevhu ndiyo chete nzira yekuziva kuti iyo pH nhanho chii. Jason Clark inyanzvi yekuwedzera ivhu kubereka pa South Dakota State University. Anoti hapana chinokurumidza kugadzirisa, saka unofanirwa kushanda nezviripo.
“Pazvirimwa zvemumunda, kuunza ivhu pH pasi pamwe nekugadziriswa, kune vamwe kunze uko vanokuudza kuti uise iron sulfate kana elemental sulfur. Asi kusvika padanho rakaenzana, izvo hazvigoneke, ”anodaro Clark. “Saka, zvinhu zvakawanda zvatinoti varimi ngavatange kuita izvi tangai nefotereza yenyu munotanga kuona kuti muri kuwana simbi dzenyu nezvimwe. Dzimwe nguva munogona kuwedzera manyowa ekushandisa kubatsira nekuwanika kwechikafu. ”
Anoti fetiraiza ine phosphorus neyesimbi inogona kuiswa muforo pakudyara kuitira kuti itore nemidzi yezvirimwa isati yawana mukana wekuita kune ivhu realkaline. Usati wadyara chero chinhu, kusanganiswa kwemasanganiswa kwakakosha kana ivhu pH rakanyanya kukwirira.
Ona Zvimwe Zvakabudirira Kurima Radio Chikamu
Ivhu pH uye kuwanikwa kwemiti michero
Ivhu pH hunhu hunotsanangudza ihwohwo acidity kana alkalinity yevhu. Nehunyanzvi, pH inotsanangurwa seyakaipa (-) danda kana hwaro hwegumi kukosha kwehuwandu hwehydrogen ions (H +). Mvura yakachena ichave padhuze nepH isina kwazvakarerekera, ndiko kuti gumi kusvika pakubvisa 10 kusangana kweH + ions (10-7 [H +]). Iko kusunganidzwa kunoratidzirwa se 10. Chero kukosha pamusoro pechinomwe zvinoreva kuti H + ion concentration yakaderera pane yepakati pH uye mhinduro yacho ine alkaline uye kune akawanda mahydroxyl (OH-) ions aripo kupfuura ma H + ions.
Chero kukosha pazasi pechinomwe zvinoreva kuti H + ion kusangana kwakakura kupfuura kwazvakarerekera pH uye mhinduro yacho iine acidic. Ivhu rinoonekwa seicidiki pazasi pH ye7, uye iine acidic pazasi pH ye5. Asi, ivhu rinoonekwa sealkaline pamusoro pH ye4 uye alkaline iri pamusoro pH yegumi neshanu. Kazhinji, ivhu pH zviyero zvinoyerwa kana 7.5 g ye ivhu rakaomeswa nemhepo rakasanganiswa ne8 ml yemvura yakapetwa kaviri kana 10 ml ye20 M CaCl2 mhinduro, uye iyo pH inoyerwa uchishandisa yakakodzera electrode yakabatana ne pH mita. Uku kuongororwa kwevhu chikamu chenguva zhinji yezvakawanda kana zvisiri zvese zvevhu ivhu.
Iko kuwanikwa kweimwe michero yezvirimwa kunokanganiswa zvakanyanya nevhu pH. Iyo "yakanaka" ivhu pH iri padhuze nekurerekera, uye ivhu risina kwazvakarerekera rinoonekwa seinowira mukati mechikamu kubva kune zvishoma acidic pH ye6.5 kusvika kune zvishoma alkaline pH ye7.5. Izvo zvakatemwa kuti akawanda masisitimu emiti anowanikwa zvakakwana kune zvirimwa mukati meiyi 6.5 kusvika 7.5 pH renji, pamwe neiyi renji yePH inowanzoenderana kwazvo kudyara midzi yekukura.
Nitrogen (N), Potasium (K), uye Sulfer (S) ndiwo makemikari makuru emiti anoita kunge asina kunyanya kukanganiswa nevhu pH kupfuura mamwe akawanda, asi achiri kune imwe nhanho. Phosphorus (P), zvakadaro, inobatika zvakananga. Pane alkaline pH kukosha, kwakakura kupfuura pH 7.5 semuenzaniso, phosphate ions inowanzoita nekukurumidza ne calcium (Ca) uye magnesium (Mg) kuti iumbe michina isinganyungudike.
Paacidic pH kukosha, phosphate ions inobata nealuminium (Al) uye iron (Fe) kuti iumbe zvakare zvisanganiswa zvisinganyungudike. Mazhinji ezvimwe zvinovaka muviri (micronutrients kunyanya) anowanzove asingawanikwe apo ivhu pH iri pamusoro pe7.5, uyezve iri inowanika zvakakwana pane zvishoma acidic pH, semuenzaniso 6.5 kusvika 6.8. Iyo yakasarudzika ndeye molybdenum (Mo), inoita kunge isingawanikwe pasi peacidic pH uye yakawanda inowanikwa zvine mwero alkaline pH tsika.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, zvigadzirwa zvinowedzerwa muvhu kugadzirisa pH. Nekudaro, izvi hazviwanzo kuitwa padanho remunda nekuda kwemutengo wakakwira. Izvo zvinowanzoitwa mukushambadzira kwekugadzira horticulture uko kune imwe yemidziyo yezvirimwa kana nzvimbo dzakaganhurirwa (semuenzaniso <mahekita gumi kusvika makumi maviri) inogoneswa kudzikisa iyo pH yevhu rakaoma rakashandurwa zvirimwa senge mamwe maruva, miti, uye / kana michero midiki (kureva bhuruu. uye cranberry). Zvakakosha kucherechedza kuti kuwanda kuri kuitika mukugadzirwa kwezvirimwa kunodzikisa ivhu pH zvishoma nezvishoma sezvo ma H + ions achiburitswa uye achishandurwa kuita nitrate nehutachiona hwevhu. Izvi zvinonyanya kuitika apo mafotereza eN akadai anhydrous ammonia, ammonium sulfate, uye urea anoiswa.
Kunyangwe iwe uchiedza kugadzirisa pH kana, kwete, zvakakosha kuti unzwisise dzimwe nzira dzekuwedzera kuwanikwa uye kushandiswa kwezvakawedzerwa zvinovaka muviri. Izvi zvinogona kuitwa nenzira dzinoverengeka dze izvo zvinovaka muviri zvataurwa pamusoro izvo zvinokanganiswa zvakanyanya nekunyanyisa muvhu pH, acidic kana alkaline. Semuenzaniso, P-ine fetiraiza inogona kuiswa mukati kana padyo nemutsara wembeu pakudyara kuti itore nguva yekutanga kwemwaka wephosphate ions nemidzi yezvirimwa isati yaibvumira kuti iite pamwe necustom cations inotonga pasi peacid kana alkaline ivhu pH mamiriro.
Pasi pevhu rine alkaline pH kukosha, iyo phosphate fetiraiza inogona kuiswa muzvikwata zvine fetiraiza iyo inogadzira ionized fomu yeammonia (NH4). Izvo zvinobvumidza kushomeka kweasidhi yevhu padhuze nebhendi rechisungo. Imwe nzira ndeyekugadzira michero yemanyowa yemanyowa yemanyowa ane iyo N, P, uye kunyangwe mafetireza ane S, ane chekushandisa kune ivhu realkaline. Iyo ivhu riri padyo negranule ichave iine acidized zvishoma uye inobvumira kunatsiridzwa P kutora apo midzi yezvirimwa inopindira granules.
Mumwezve muenzaniso ndeyekushambadzira kwemafuta anonyungudika e Fe fetiraiza kune zvirimwa zvisina Fe zvakarimwa muvhu repamusoro pH apo fetiraiza inoita nekukasira nevhu zvekuti chikafu chinosungwa uye hachiwanikwe kumiti. Ichi chikonzero nei ivhu rakaiswa Fe mafetiraiza kazhinji asingabudirire kugadzirisa Fe kushaikwa. Nekudzivirira ivhu uye kuisa iyo Fe kumashizha, iyo shoma yemiti-inodiwa Fe inosvitswa kupinzwa muchirimwa.
Inotevera nguva iwe paine ivhu sampuli dzakatorwa kuminda yako, tora nguva yekucherechedza kuti zvipi pH zviri mumhedzisiro yako. Izvo zvinobatsira kuenzanisa aya maitiro kune yapfuura ivhu bvunzo pH kukosha uye kuona kana paine maitiro evhu pH shanduko. Nekutarisa pH tsika nguva dzose (makore maviri kusvika matatu) mumunda, unogona kufunga nezve chiito chekusimudza pH yevhu kubva kuacidic kusvika padyo nepakati pH tsika nekumisikidza.
CHOKUITA NEMAHARA PH DZIVA
Kuwedzera kwehutano hwekuwana uye kuvandudzwa kwezvirimwa kukura kunogona kuwanikwa kana uchiwedzera zvinhu zvekuisa muvhu rakawandisa. Izvi zvinogona kunyanya kukosha kuzvirimwa zvinoda kwazvakarerekera pH, senge mafuruu enduru kana mapurses, sezvo maRhizobia marudzi emabhakitiriya asingatenderi uye kugadzirisa N zvinobudirira pasi pH tsika isingasviki 5.5
Tags: dzora ivhufertilizerkudyara tekinorojimanejimendi manejimendi
Mbatata yembeu yaBrabant: hukuru-hukuru uye hunyengeri hwakadzokororwa
Chishandiso chinotakurika chekutsvaga nekukurumidza kwekushushikana kwemuti